Dowladda Qadar oo muddo 10 maalmood ah loo qabtay inay ku fulliso 13 qodob (AKHRISO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Qadar oo muddo 10 maalmood ah loo qabtay inay ku fulliso 13 qodob (AKHRISO)
Dowladaha Sucuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxreyn ayaa dowladda Qadar u qabatay muddo 10 maalmood ah inay ku fulliso illaa 13 qodob oo ay dowladahaasi usoo bandhigeen, hadii ay doonayso in xiriirka diblomaasiyadeed dib loogu soo celiyo.
Aggaasimaha xiriirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qadar Sheekh Saif Bin Axmed Al Thani ayaa 13-kaasi qodob ku tilmaamay inay yihiin kuwa aan la aqbali karin, islamarkaana hoos u dhigaya madax-banaanida dalka Qadar.
Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheekh Cabdullah Bin Zayed Bin Sultan Al Nahyan ayaa dowladda Qadar ku eedeeyey inay 13-kaasi qodob u gudbiyeen warbaahinta, halka ay dhab ahaan u qaadan lahaayeen, waxaana uu sheegay in mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay fullinta qodobadaas.
Hoos ka aqri 13-ka qodob oo dowladda Qadar laga doonayo inay ku fulliso muddo 10 maalmood:-
1- Inay xiriirka oo dhan u jarto kooxda Ikhwaanu Muslimiinka oo dalalka kale ee Carabta laga mamnuucay
2- Inay si deg deg ah u xirto xarunta milatariga ee uu Turkiga ka dhisayo gudaha Qadar, xiriirka wadashaqeynta milatari-na ay u jarto dalkaasi.
3- Inay xirto telefishinka Al Jazeera iyo laamaha warbaahineed ee xiriirka la leh.
4- Inay u diido inay dhalasho siiso muwaadiniinta afarta dal ee xiriirka u jartay, kuwa hadda joogana ay dalkeeda ka ceyrsio. Waxay sheegeen in taasi ay horseedi doonto in Qadar aysan faragelin
ku sameyn arrimaha daakhiliga ee dalalkaasi.
5- Inay dalalkaasi ku soo wareejiso shakhsiyaadka loo hayssta inay ku kaceen falal argagixisnimo ee dalkeeda ku nool.
6- Inay joojiso maalgelinta kooxaha ay Mareykanku ku sheegay inay yihiin argagixiso.
7- Inay macluumaad badan ka bixiyaan kooxaha mucaaradka ee ay Qadar maalgelisay ee ku kacsan sacuudiga iyo dalalka kale.
8- Inay joojiso maalgelinta kooxaha mucaaradka ku ah dalalka Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxrayn.
9- Inay u dhaqanto si waafqasan danaha dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalalka ku jira Golaha Khaliijka.
10- Inay joojiso si dadban u maalgelinta warbaahinta sida Carabiya21 iyo Middle east Eye
11- Inay bixiso lacag ganaax ah oo aan la sheegin caddadeeda oo ah magdhawga saameynta ka dhalatay siyaasadaha kahladan ee ay Qadar ku dhaqmeysay muddo sanado ah.
12- Inay 10 maalmood gudahood ku aqbasho dallabaadkan.
13- Inay aqbasho baaritaanno iyo dabagal joogto ah oo lagu eegayo sida ay u fulineyso dalabaadkan bilaha iyo sanadaha soo socdo.
Dhammaan qodobadaasi ayaa lagu dhawaaqay kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson uu ugu baaqay dalalka ay Qadar dariska yihiin in dalabkoodu uu noqdo mid sabab leh oo wax laga qaban karo.